अर्थमन्त्री भए राजस्व दोब्बर, गृहमन्त्री भए ३ महिनामै आधा अपराध घटाउँछुु, राजनीतिक संरक्षण हुँदैन’::Pathivara News
मिल्यो एमाले–माओवादीबीच मन्त्रालय बाँडफाँट : एमाले अर्थसहित ११, माओवादीले पायो गृहसहित ७ मन्त्रालय (भागबण्डाको सूचीसहित) बच्चालाई पढाई प्रति मन लगाउन, बुधवारको दिन यसो गर्नुहोस् मन्त्री लालबाबु सडकमा निस्किए प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच भेटवार्ता यस्तो भो सहमति ? अपहरणकारी पक्राउ गर्ने इन्स्पेक्टर १५ दिनदेखि आइजीपीको थुनामा
अर्थमन्त्री भए राजस्व दोब्बर, गृहमन्त्री भए ३ महिनामै आधा अपराध घटाउँछुु, राजनीतिक संरक्षण हुँदैन’
मोरङ—६ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि नवनिर्वाचित सांसद नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितसँग गरिएको कुराकानी :
चुनावमा विजयी हुँदा कस्तो अनुुभव भइरहेको छ ?
मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का जनताले विश्वास गरेर मलाई जिताएका छन्। म असाध्यै खुसी छु । जनता पनि खुसी छन्। विजयी भएको घोषणा भएदेखि लगातार ७ घन्टासम्म म खुसी साट्न जनताकै माझमा थिए । बिहान ५ बजेदेखि ११ बजेसम्म अबिर लगाउने र सेल्फी खिचेर जनतास“ग खुसी साटेँ। लगातार ७ घन्टासम्म फोटोसेसन भइरह्यो । यति लामो खुसीयालीस“गै जनताको विश्वास पनि प्राप्त गरेको छु।
जितपछि पहिलो प्राथमिकता के हो ?
अहिले म सांसद मात्रै हुँ । अरू केही जिम्मेवारी पाइसकेको छैन । संसद्मा गएर थाँती रहेका धेरै काम पूरा गर्नुछ । यतिबेला संविधान परिष्कृत गर्दै कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउनु मेरो पहिलो जिम्मेवारी हो । अहिले सांसदका रूपमा रहनेछु । पार्टीबाट थप जिम्मेवारी पाए“ भने जिम्मेवारीअनुसार जनताको सेवा गर्छु । जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्छु ।
तपाईंका मुख्य अजेन्डा के–के छन् ?
विराटनगरलाई प्रदेश नम्बर १ को राजधानी बनाउनु मेरो पहिलो अजेन्डा हो । चुनावमा पनि मैले यही अजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ जनतामाझ राखेको थिए“ । कागजमा मात्रै सीमित रहेको विराटनगर महानगरपालिकालाई वास्तविक महाननगर बनाउनु मेरो अर्को अजेन्डा हो । विराटनगरलाई बृहत्तर महानगरका रूपमा आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर अघि बढाउन मेरो भूमिका रहनेछ । यस क्षेत्रको सुकुम्वासी समस्या समाधान तेस्रो एजेन्डा हो । क्षेत्र नम्बर ६ मा जनता आवास कार्यक्रममार्फत सुकुुम्वासीले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्नेछु । विराटनगर औद्योगिक नगरी भएकाले यस क्षेत्रमा उद्योगको विकास गर्नु मेरो अर्को अजेन्डा हो ।
नया“ उद्योग स्थापना हुने वातावरण तयार पारी उद्योगलाई यस क्षेत्रको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाउनेछु । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले थालेको कामलाई पूरा गर्न कोइरालाले शिलान्यास गरेको भ्यूू टावर निर्माण गर्नेछु । विराटनगरलाई शैक्षिक र स्वास्थ्यको हबका रूपमा अघि बढाउनेछु । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको बिग्रेको साख फिर्ता गर्न सुधारका काम थाल्नेछु । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेछु । यस क्षेत्रको नदी नियन्त्रण, सडक, सिँचाइ, पुल निर्माण लगायतका पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने मेरा योजना छन्।
वाम गठबन्धनले जिते विराटनगर राजधानी हुँदैन भन्ने हल्ला छ नि ?
नक्कली कुरा गरेर जनतामा भ्रम पार्नु राम्रो हैन । मतदातालाई अलमल्याउन यस्ता भ्रामक प्रचार भइरहेको हो । जसले प्रदेशको राजधानी धनकुटा पुर्‍याउन चलखेल गरे, जसले विराटनगरलाई महानगर बन्न अवरोध गरे उनीहरूले नक्कली प्रचारमा लागिरहेका छन् । नक्कली कुरा गरेर अर्कालाई दोष थोपार्नेभन्दा आफूू सच्चिन जरुरी छ । ऐतिहासिक आधार, पूर्वाधार विकास र सुुगमताका आधारमा प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर नै राजधानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ । विराटनगर नै प्रदेशको राजधानी बन्छ ।
कम्युुनिस्ट खहरे हुन् कहिलेकाहीँ उर्लिन्छन् भन्ने गरिएको छ नि । के तपाईंले पनि उर्लिएको बेला परेर जित्नुभएको हो ?
जित्नका लागि मात्रै काम गर्ने हैन । सा“च्चै काम गर्ने मान्छे हो म । जनतास“ग नजिकिएर जनभावना बमोजिम काम गर्ने हो भने जनतामा पनि नेताप्रति विश्वास हुन्छ । पदमा पुुगेपछि लुट्ने र चुनावमा लुटाउने दुुवै प्रवृत्तिको विरोधी हुु“ म । मजदुर किसानले दिएको थोरै थोरै रकम परिचालन गरेर चुनाव जितेको छु । करोडौँ खर्च गर्नेको पक्षमा पनि परिणाम छैन । चुनाव जितेर गएपछि जनताको हितमा जनचाहना बमोजिम नै काम गर्नेछु ।
तपाईंको जितका मुख्य आधार के—के थिए ?
जितको मुख्य आधार विगतमा जिम्मेवारी पाएको अवसरमा गरेका राम्रा काम नै मुख्य आधार हो । यस बाहेक जनतास“ग झुटा वाचा नगर्ने, जे वाचा गरेको छ त्यो पूरा गरेरै छाड्ने र दृढ संकल्पसाथ थालेको काम पूरा गर्ने भएकाले नै मैले चुनाव जितेको हुँ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा डिभी–पिआर काण्डले चर्चामा आउनुभएको थियो । अब, त्यस्तै चर्चित काम के गर्ने योजना छ ?
भर्खर चुनावको रिजल्ट हुँदै छ । अहिले नै कुनै जिम्मेवारी पाएको छैन । अब, रिजल्ट आइसकेपछि मात्रै पार्टीभित्र छलफल हुन्छ । पार्टीले जसरी जिम्मेवारी दिन्छ । त्यसपछि मात्रै के काम गर्ने भन्ने निक्र्याेल हुन्छ । पार्टीबाट जिम्मेवारी पाएअनुसार जनताको पक्षमा राम्रा काम गरेर देखाउँछु । गृहमन्त्री बन्न पाए भने ६ महिनामा ५० प्रतिशत अपराध घटाइदिन्छु ।
राजनीतिक संरक्षणमा रहेका अपराधीहरूलाई जेल चलान गरिदिन्छु । यति गर्न सकिन भने मेरो नामै नलिनुस् । अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएँ भने राजस्व असुुली दोब्बर बनाइदिन्छु । मेरो योजना अनुसार चल्ने हो भने दश वर्षभित्र रोजगारीका लागि कतार गएकाहरू काम गर्न देशमै फर्कने स्थितिमा देशलाई पु¥याइदिन्छु । २० वर्षमा नेपाललाई दातृराष्ट्र बनाउ“छु ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनका आधारमा सम्पन्न भएर पनि परिचालनको नेतृत्व गर्नेको अभावले पछि परेको हो । सिंगापुर जस्तो बलौटे देश त संसारकै विकसित देश भएको छ । नेपाल चाहिँ मगन्ते देशका रूपमा रहरिहने स्थिति अब अन्त्य हुनुपर्छ ।
विदेश गएका युवा फर्काउने कुरा गर्नुभयो । कसरी सम्भव होला ?
घरमा भाँडा नमाझ्ने अर्काकोमा भाँडा माझ्दा गर्व महसुस गर्ने प्रवृत्तिले नै हामी पछि परेका छौँ । अर्काकोमा जागिर खोजिहिँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभई हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ । नयाँ उद्यमी, व्यवसायी बनाउन सक्दैनौँ । उत्पादन बढाउन सक्दैनौँ र रोजगारीसमेत सृजना गर्न सक्दैनौँ । राम्रो काम गरेर आफू उदाहरणीय बन्ने प्रयास गरे मात्रै अरूले पनि क्रमशः उदाहरणीय काम गर्दै जान्छन् भन्ने सन्देश बोके हुन्छ ।
जबसम्म उद्यमशीलताको विकास हुँदैन तबसम्म आर्थिक विकास कल्पनामात्रै हुुन्छ । त्यही भएकाले आफू अरूकोमा काम गर्न जाने हैन, अरूलाई कसरी काम लगाउन सकिन्छ, रोजगारी कसरी दिन सकिन्छ भन्ने चिन्तनसहित काम थाले देशको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । व्यक्तिको व्यवहारले राम्रो र नराम्रो हुने भएकाले हाम्रो व्यवहार र प्रवृत्तिमा सुुधार ल्याउन जरुरी छ । व्यक्तिको व्यवहारले राम्रो र नराम्रो हुुने हो । आफ्नो व्यवहार सुधार्यौं भने हाम्रो उन्नतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन।
व्यवहार सुुधारको कुरा गर्नुभयो । सबैभन्दा विकृति त राजनीतिक नेताहरूमै छ नि ?
हो, सही कुुरा भन्नुभयो । म पहिलोपटक मन्त्री बन्दा एकजना पुराना नेताले नयाँ मन्त्री पुरानाको पछिपछि हिँड्नुुपर्छ भनेका थिए । विदेशीबाट ऋण लिएर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले नै समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । म मन्त्री भएकै बेला विदेशीले दिएको ऋण अर्थमन्त्रालयबाट अनुदानको रूपमा लिएर घर–परिवारमा करेसाबारी लगाउने कार्यक्रम चलाइएको थियो । घुरेनमा साग रोप्न कुनै तालिम चाहिन्छ ? नचाहिने ठाउ“मा ऋण लिएर खर्च गर्नु सरासर ठगीसिवाय केही हैन ।
२०५१ सालमा मन्त्री भएका बेला १० करोडको प्रोजेक्ट लिएर एक जना आएका थिए । प्रोजेक्ट स्वीकृत गरेबापत २ करोडको अफर गरेका थिए । परियोजना के थियो भने नाङ्गा डा“डामा रुख रोप्ने । सुुन्दा कति राम्रो योजना तर, मैले अस्वीकृत गरिदिए“ । किनभने, हेलिकोप्टरबाट पहाडका डा“डामा माटो मिसाएर बीउ छर्ने अनि रुख उमार्ने । यसरी बीउ छरेर बिरुवा उम्रिन्छ भनेर सोधेको । ऋण स्वीकृत गर्नुहोस् काम हुन्छ । उम्रे पनि नउम्रे पनि काम देखिएपछि पैसा आइहाल्छ परियोजना ल्याउने व्यक्तिले जवाफ दिएका थिए ।
यस्ता खालका योजना स्वीकृत गरेर देश डुबाउने काम म गर्दिनँ । अहिले पनि थुप्रै बकमफुसे काम देशभर भइरहेका छन् । यस्ता खाले ठगी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु नै अबको चुनौती हो । देश बिग्रेकै अनियमितताले हो । कागज मिलाउने र बजेट पचाउने प्रवृत्तिले विकास बजेट खर्च नहुने साधारण खर्च भने चुलिँदै गइरहेको छ । विकासका काम कमसल गर्ने र बारम्बार ठेक्का पारेर एउटै काम वर्षैपिच्छे गरेर पैसा कमाइराख्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यस्ता अनियमितता र विकृतिको अन्त्य नगरेसम्म देशको विकास हुनसक्दैन।
विराटनगरमा वर्षौंदेखि विकासका एउटै माग दोहोरिइरहेका छन् । के अब ती माग सुनुवाइ हुन्छन् ?
विराटनगरवासीले मुख्य पाँचवटा विकासका पूर्वाधार निर्माणको माग गरिरहेका छन् । विराटनगर रिङरोड, विमानस्थल विस्तार, रेलमार्ग निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना र एकीकृत जा“च चौकी निर्माणका मागलाई यहा“का स्थानीयले पटक—पटक उठाइरहेका छन् । यी सबै कामका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी काम अघि बढाउन म प्रयास गर्नेछु । यी सबै योजना चा“डो निर्माण हुनुुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो।
अन्तिममा जनतालाई के भन्न चाहनहुुन्छ ?
जनताले मलाई विश्वास गरेर मत दिनुभएकामा आभार व्यक्त गर्छु । ममाथि जनताले आशा र विश्वास पनि गरेका छन् । जनताको आशा र विश्वास पूरा गर्ने मेरो संकल्प छ । नकारात्मक कम र सकारात्मक बढी सोच्नुस् । परिवर्तन अहिले नै सम्भव छ । अब, देश आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्छ ।
स्रोत: नागरिक, प्रस्तुति : विनोद सुवेदी
आइतवार, मंसिर २४, २०७४ मा प्रकाशित
एमाले नेता नेपाल भन्छन-‘राष्ट्रपति बनेर अरुलाई उपदेश दिने मेरो उमेर भइसकेको छैन’
देश र जनताकै हितमा ईमान्दारितापूर्वक नबिराई नडराई काम गर्छु : लालबाबु पण्डित
हामी एमालेसँग मिल्दैनौं, माओवादीलाई पुर्नगठन गछौं’
वाम गठबन्धन घाँसभित्र लुकेर बसेको हरियो सर्प हो- प्रकाण्ड
मिल्यो एमाले–माओवादीबीच मन्त्रालय बाँडफाँट : एमाले अर्थसहित ११, माओवादीले पायो गृहसहित ७ मन्त्रालय (भागबण्डाको सूचीसहित)
काठमाडौं, फागुन १० एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबण्डा टुंगो लागेको छ । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष...
बच्चालाई पढाई प्रति मन लगाउन, बुधवारको दिन यसो गर्नुहोस्
मन्त्री लालबाबु सडकमा निस्किए
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच भेटवार्ता यस्तो भो सहमति ?
अपहरणकारी पक्राउ गर्ने इन्स्पेक्टर १५ दिनदेखि आइजीपीको थुनामा
जापानको चर्चीत पत्रिकाले लेख्यो “केपी ओली एसियाकै उत्कृष्ट नेता”
एमाले–माओबादी एकताबारे बजारमा चलेका ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’
काठमाडौं, एमाले माओवादी बीचको...
कांग्रेसको रोदनः आफ्नै विगत हेर्ने कि ?
विष्णु रिजाल राष्ट्रपति विद्यादेवी...
संचालक/सम्पादक : सरोज चौलागाई